turbine rivotra mikraoba miaraka amn'ny mpamorona rivotra mitsivalana maivana miaraka amina elatra 3 ho an'ny kilasy angovo vaovao
Famolavolana kely, vokany fampisehoana lehibe, azo ampiharina sy maharitra.
Fanehoana tena tsara amin'ny fampitaovana fampitaovana herin'ny rivotra.
Azo ampiasaina amin'ny fanaovana karazana teknolojia famokarana kely, fanaovana maodely.
F-S3-400 400w mpiorina turbinina rivotra mpiorina rivotra mpamokatra herinaratra mahery mpamokatra herinaratra
3.5W Solar Charger Polycrystalline Solar Cell Solar Panel USB Solar Mobile Charger Ho an'ny Power Bank
1,5 heny ny mari-pana fandrefesana spectrum / Component 25 °
Ny varotra dia mivarotra 3.5W Solar Charger Polycrystalline Solar Cell Solar Panel USB Solar Mobile Charger ho an'ny Power Bank
Fahaiza-mamatsy: 50 Piece / Pieces isan-kerinandro
China factory 1kw 5kw 10kw 24V 48V 220V Gearless Permanent Magnet Generator AC Alternators Ampiasaina Ho an'ny Turbine Rano Turbine
1. Mpamorona andriamby maharitra tsy fahita eto an-tany
2.tory fanombohana ambany, fampiasana angovo avy amin'ny rivotra avo;
3. habe kely, fisehoana tsara tarehy, hovitrovitra ambany
4. famolavolana namana olona, ​​fametrahana mora, fikojakojana ary fanamboarana.
5.permanent mpamokatra andriamby mpanamboatra mampiasa
alternator misy patanty, miaraka amin'ny endrika stator manokana, mampihena amin'ny fomba mahomby ny andiana herinaratra fanoherana, raha
mamela ny turbine sy generator mahery kokoa manana toetra mampifanaraka azy, mihazakazaka azo itokisana ilay singa
Ny turbine rivotra mikraoba dia mampiasa mpamokatra angovo maharitra 100W 200w 300w12v 24v 48v mpamokatra angovo hafa
1. Rafitra tsotra, azo itokisana ambony.
2. Koba kely, lanja maivana, hery lehibe.
3. Famokarana herinaratra antonony sy ambany hafainganam-pandeha, fampisehoana tsara.
4. Afaka manitatra ny androm-piainany, mampihena ny fikojakojana ny bateria.
5. Fahombiazana avo.
6. Generator generator maharitra maharitra tsy misy boribory, tsy misy firafitra peratra, manala ny fikorontanan'ny karbaona sy ny fikorontanan'ny peratra noho ny onjam-peo, fa mampihena ihany koa ny mpamokatra amin'ny takian'ny mari-pana manodidina
China factory 600w 3 5 bladesHorizontal axis wind tu 3phase AC 12v 24v 48v wind turbine with MPPT wind controller for home use
China factory 800W 12v 24v 48v axis vaovao turbine axis rivotra Generator rivotra miaraka amin'ny mppt Controller Hampiasaina an-trano
F-S3-100 100w 3 blades 12V 24V 48V 50HZ DC turbine generator kely rivotra